"Viagra ကိုစွဲနေသူ - သူတို့ဟာအနိုင်ကျင့်ဆုံးသူဖြစ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအပြာဆေးလုံးသေးသေးလေးတွေမပါဘဲလူငယ်တွေတိုးများလာတာကိုမခံနိုင်ဘူး" - Your Brain On Porn
Viagra ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်း - သူတို့သည်အနိုင်ကျင့်ဆုံးတွင်ဖြစ်သင့်သော်လည်းငယ်ရွယ်သောလူငယ်များသည်ထိုအပြာရောင်ဆေးပြားများမပါဘဲမခံရပ်နိုင်ကြပါ”
By Tanith ကယ်ရီ
Published:3အောက်တိုဘာလ 2012
အဆိုပါပေါ့ပေါ့လေ့လာသူစေရန်, ဘွဲ့ဒံယလေသ Atkinson သည်သူ၏အသက်တာ၏ချုပ်အခြားကျန်းမာသော, အားကစားလုလင်ကိုနဲ့တူလှပါတယ်။
စို့ cheekbones နှင့်လျကောင်နှင့်အတူအရပ်ရှည်ရှည်ခြောက်လခြေလျင်, ဒံယေလသူမဆိုအခက်အခဲဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုဆွဲဆောင်ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှဝန်ခံသည်။
သို့သော်ဒံယေလသည် 32 တစ်ဦးသည်အလွန်ရင်းနှီးသောလျှို့ဝှက်ချက်ရှိပါတယ်။ သူကအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့လိုလားသောအခါသူဖျော်ဖြေဖို့နှစ်ခု Viagra ဆေးပြားအထိလိုအပ်ပါတယ်။
ခြိမ်းခြောက်ခြင်း - လူငယ်များသည်ယနေ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသောအမျိုးသမီးများအပေါ် ပိုမို၍ စိုးရိမ်လာကြသည်
Tသူ NHS အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့အပြာရောင်ဆေးပြား, ရှည်လျားသောမရှိမဖြစ်သူတို့ရဲ့ 50s လူများအတွက်ဆေးဝါး, 60s နှင့်ကျော်လွန်ပြီးအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ဒံယလေက '' သာမန် '' လိင်အင်တာနက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ပြန့်ပွားခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတစ်အိမ်ရှင်များကဖြစ်ပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးလှညျ့ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ကြီးထွားလာနံပါတ်, တစျဦးဖွစျသညျဘဏ္ဍာရေးဖိအားရန်, ပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်။
သူ့ရည်းစားကိုသူတိတ်တဆိတ်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် Viagra ပင်တစ် 24 နှစ်အရွယ်စာရေးဆရာယခုနှစ်အစောပိုင်းက၏သတ်သေအတွက်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျိမ်း Andrews ကရဲ့ခန္ဓာကိုယ် Valentine Day ကိုပေါ် Bristol ကနှင့်ဗာသကြားတစ်ဦးမီးရထားလိုင်းတွင်တွေ့ခဲ့သည်။ သူသေဆုံးသို့တစ်ဦးစစ်မေးခြင်းသူရည်းစား Eleanor ရှပ်နှင့်အတူခှဲင်ဘယ်လိုထင်ရှား - အိုလံပစ်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား၌ထငျရှားသူတစ်ဦးဘဲလေး dancer - မူးယစ်ဆေးသူ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦး '' ပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာ '' ခံစားအဆိုပါ pair တစုံနေသော်လည်း
သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဆေးလုံးကိုယူသည့်အခါယခုတစ်ဖျော်ဖြေရေးကမကထဒံယေလ, အမ်စတာဒမ်အတွက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပဲ 20 နှင့်တနင်္ဂနွေပေါ်ခဲ့သည်။ သူမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတက်ခူးပြီးမှဒါဟာမိတ်ဆွေတစ်ဦးတို့ကသူ့အားထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
သူ erectile ပြဿနာများရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းသူနောက်ဆက်တွဲမိန်းကလေးနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးယူဆက်လက်ကြောင့်သူ့ကိုပေးသောအပိုလုံအားဖြင့်ဒါသဘောကျခဲ့ပါတယ်။
နှစျကွိမျတွင်သူသည်ပင်ထိုကဲ့သို့သောအပြာ-tinged ရူပါရုံကို, နှလုံးရောဂါပြဿနာများနှင့်ကြားနာဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးချက်များနှင့်အတူဆိုသော်ငြား, သူ့မိသားစုဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကဆရာဝန်များကတိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်သူအလုပျအတှကျစပိန်မှသွားရောက်ကာတဲ့အခါမှာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထကောက်နေသဖြင့်လည်းကောင်း - သူဟာတစ်နှစ်£ 1,000 အထိသုံးစွဲပြောပါတယ်ထားတဲ့အပေါ် - အခုတော့ဒံယလေကသူအမြဲတမ်းမူးယစ်၏ပုံများကိုပြောပါတယ်။
'' အဲဒီမှာအဆိုပါဆရာဝန်များကပွဲချင်းပြီးပေါ်တွင်သင်ကသူတို့ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်ကဓာတုဗေဒပညာရှင်ကိုသွားနှင့်ထောက်ပံ့ရေးရယူပါ။ အင်္ဂလိပ်ကလူနဲ့အတူတူပါပဲပြီးနောက်နေသော queuing အမြဲရှိပါတယ်။ ''
သူ says: 'ငါအစားအစာ, ငါသည်မှန်မှန်အားကစားခန်းမမှာလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကငါဖြစ်သကဲ့သို့နီးပါးအဖြစ်မထိုက်မတန်ဖြစ်၏။ ငါအမြိုးသမီးမြား၏ကုမ္ပဏီကိုချစ်ပြီးအမြဲရှိသည်။ ယခုမူကားငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်က hard Viagra မပါဘဲလုပ်ဖို့ကိုရှာဖွေ, ငါသည်ဤမျှလောက်လိင်ထိတွေ့ပြီ, ငါ့ 30s အတွက်ဖြစ်၏။
ဆေးတွေ - အမျိုးသားအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ Viagra ကို Viagra ကိုပြောင်းလာကြတယ်
ပုံမှန်တစ်လတစ်ဦးညစ်ညမ်း site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု 70 မှ 18 အသက်အထီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်း 34 ထက်ပို
'' ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်းမှတဆင့်င့်ဘာခံစားတာကိုဘယ်လို, ဒါမှမဟုတ်ငါနှင့်အတူရယ်မိန်းမအားဆွဲဆောင်ဘယ်လိုနေပါစေ, မခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ကြောင့်ပေါ့သိလျှင်ယခု, ငါမသိမသာကြိုတင်နှစ်ခုဆေးပြားယူပါ။ ''
performance စိုးရိမ်စိတ်: ဒံယလေသတဲ့ Viagra အပေါ်မှီခို
အဆိုပါမူးယစ်ဆေး sildenafil citrate ပါရှိသည်နှင့်လိင်တံထဲမှာသွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒံယလေကသူတစ်ခါတစ်ရံမိမိနားထဲမှာအူတွေ့ကြုံဝန်ခံသည်။ ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်များကြားမှသူနည်းနည်းရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းသောသူကဲ့သို့ခံစားရ၏။
'' ငါကငါ့အနျြးမာရေးအတှကျဆိုးရဲ့သိ '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ '' ငါတက်ဘလက်ယူသောအခါငါငါ့နှလုံးရင်တုန်စကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ, ငါအအေးချွေးထွက်လာကြ၏။ တခါတရံမှာရိုက်နှက်မှုဒီတော့အသံကျယ်သည်, ငါနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုရှိသည်သွားပါ၏ထင်ပါတယ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့အခြို့သောအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ ''
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ယခုငယ်ရွယ်ပြီးထင်ရသော virile ၏လိင်ဘဝတွေကိုကျော်ယူပြီးတခါမီးခိုးရောင်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါး, သူတို့ရဲ့ချုပ်အတိတ် paunchy ယောက်ျား, ပါသလဲ
ဒါပေမယ့် Apex အလေ့အကျင့်မှာကိုအခြေခံပြီးသူရေမွန်, says: '' ငါသည်ဤပြဿနာပဲသေးငယ်တဲ့နမူနာဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဤသူတို့သညျ erectile အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်လို့မဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အဲဒီအစားသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်သိပ်အများကြီးမျှော်လင့်ချက်များချပြီးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ကလိုအပ်ခံစားရတယ် - ။ သူတို့ကအမြိုးသမီးအိပ်ခန်းထဲမှာလိုခငျြယုံကြည်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီး ''
အမြားအပွားကိစ္စများတွင်ရေမွန်ကသူ့အထီးလူနာလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမြင်နေလွှမ်းမိုးမှုပြီဟုဆိုသည်။ '' တခါတလေဒီလူနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း embedded နှင့်လက်တွေ့သူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမျှော်လင့်ချက်များရှိပါလိမ့်မယ် - ။ သို့မဟုတ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဖြစ်သင့် ''
တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောလူနာသူနှစ်ဦးကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအကူအညီနဲ့ရှာသောအခါရှေ့တော်၌မိမိ 31s တာတစ်လျှောက်လုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်မှီခိုသူဆမ်, 20 ဖြစ်ပါသည်။
ဆမ်သူ 12 အခါကြည့်ရှုစတင်ခဲ့ပြီးပြောပါတယ်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်သူ၏ပြဿနာများ၏အမြစ်နေရာ - သူသည်မိမိအပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာရှည်မီ။ '' ဤသူအပေါင်းတို့လုံးအဆုံးပေါ်နာရီသွားမြင်လျှင်ငါမလုပ်ပေးနိုင်တော့သောအရာကိုမဉျြးသား, အလေးအနကျပွောသလိုပဲ, 'သူကပြောပါတယ်။
'ငါဒါရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်။ တစ်ခါတုန်းကငါ့အမိသားစုဆရာဝန်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သူဒါနဲ့မည်သူမဆိုအတူပြန်ဘာသာရပ်ဆောင်ခဲ့ဝံ့ဘယ်တော့မှအလွန် unsympathetic ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရတဲ့အရာကိုသေချာဘယ်တော့မှခဲ့သော်လည်း, web ပေါ်မှာသူတို့ကိုမိန့်စတင်ခဲ့သည်။ ''
'' ငါကရည်းစားရှိခဲ့သည့်အခါငါသည်နံနက်အချိန်၌ Viagra ပထမဦးဆုံးအရာယူချင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါကျော်လိင်အရထိန်းချုပ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင်အတူပြုချင်ပါတယ်။ ': ဆမ်ကပြောပါတယ်
porn ၏ကျိန်ခြင်း: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့လုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်စိုးရိမ်အများအပြားယောက်ျားကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်
မူးယစ်ဆေးဝါးလျှို့ဝှက်အပေါ်သူ၏မှီခို Keeping, သို့သော်, ဆက်ဆံရေးအပေါ်မခံနိုင်သောဖိအားထားရှိ: 'ဒါဟာငါဒီအခြေခံအကျဆုံးအရာနှင့် ပတ်သက်. ရိုးသားဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အပြည့်အဝစိတ်ခံစားမှုကျူးလွန်ဘယ်တော့မှနိုင်ဆိုလိုသညျ။ အကြှနျုပျ၏ဆက်ဆံရေးမြေပြင်ကိုချွတ်တယ်ဘယ်တော့မှမ။ ဒါဟာအားလုံးငါလိင်ရှောင်ရှားစတင်ခဲ့ပြီးဒါစိတ်ဖိစီးမှုရတဲ့ခဲ့သည်။ ငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးများကိုငါသူတို့လိုခငျြသောအရာကိုထိအသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရဘူးခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုသလိုပဲ။ ငါကျရှုံးခြင်းနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ''
'ငါတို့အတူတူအိပျပျြောပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်မလျှို့ဝှက်စွာ ယူ. , ဒါပေမယ့်သူမဟာငါ့ထံသို့ဒီတော့အထူးကြောင့်မျှော်လင့်မြင့်မားခဲ့သညျ။ ဒါကြောင့်အချိန်ကိုတောင် Viagra အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မသူမကသူမ၏အမှားဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်စိုးရိမ်နေကြခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခဲ့တွေ့မြင်နိုင် - ။ နှင့်သူမ၏အရာအားလုံးပြောသည် ''
ဆမ်ယခုသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်။ '' ဒါဟာအကြံပေးခြင်း၏ခြောက်လ ယူ. , ဒါပေမဲ့သူမကိုကျေးဇူးတင်ငါအခြေခံပြဿနာများကိုကိုကြည့်ဖို့သတ္တိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ''
'' အမြိုးသမီးမြားယခုဒါဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့ရှိပါတယ်, 'ရေမွန်ကပြောပါတယ်။ '' သူတို့ကသူတို့ကလိင်ကအရှိန်အဟုန် dictate မှယောက်ျားသလောက်ခွင့်ရှိသည်ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကကရာအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြမညျ့သူမိန်းကလေးများအကြောင်းပြောနေတာကြသည်မဟုတ်။
'' မယ့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသားစဉ်မြေးဆက်အတွက်, တစ်ဦး turnaround ရှိခဲ့သည်။ မီ, ကအမြဲလူအသားစားသောမြျှောလငျ့ခဲ့သညျ။ အခုတော့ ladette ယဉ်ကျေးမှုက၎င်း၏ဦးခေါင်းတွင်လှည့်ထားသည်။ ဒီဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လူပျိုတို့ကိုမဆိုလိင်ရာအရပ်ကိုကြာရှည်စွာရှေ့တော်၌ထိုအိပ်ခန်းမှစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်မှုတွေဆောင်ခဲ့ရမည်။ ''
တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောလိင်ယုံကြည်မှုအမြိုးသမီးတ Nicola တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသူ့ခွန်အားမရှိခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကကူညီပေးခဲ့သည့်သူမ၏မိတ်ဖက်ပေါ်တွင်တင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များကိုခဲ့ဝန်ခံသည်သူနှောင်းပိုင်းတွင် 20s အတွက်ဆွဲဆောင်မှုဘဏ္ဍာရေးအလုပ်သမားဖြစ်ပါတယ်။
'' လိင်အကြီးမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ငါပိုဆိုးပြဿနာကိုဖန်ဆင်းသောအစကတည်းကမှဘယ်လောက်စိတ်ပျက်အကြောင်းကိုရိုးသားခဲ့တယ်, 'သူမကဆိုသည်။
'' ကျနော်တို့ Viagra ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တကစီစဉ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုငါသူကခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်မယ့်လျှင်သူ့ကိုငါ့ကိုပြောပြချင်ပါဘူး။ ငါ့လိင်သဘာဝကြီးထင်ချင်ကြတယ်။ ''
Nicola လိင်မှသူမ၏သဘောထားကိုသူမ၏မျိုးဆက်ပုံမှန်ကပြောပါတယ်, သူ့မိန်းကလေးများစွာကိုအိပ်ခန်းထဲမှာအလားတူပြဿနာများသတင်းပို့ရသည်။
ခေတ်သစ် - ယနေ့ခေတ်တွင်အမျိုးသမီးများသည်အိပ်ရာထဲတွင်ဘာလိုချင်သည်ကိုသိကြသည် - လူငယ်များစွာအတွက်မူ၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်
သူမသည် says: '' အမြိုးသမီးမြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်၏ပိုရှိသည်လုပ်ပါ။ သောသူ၏အပေါ်ဖိအားအခြားအလွှာရဲ့ဒါငါ့အဖက်မယ့်သာ, ငါးဖူးအနေဖြင့်ကျနော်, 15 မိတ်ဖက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအတော်လေးကျွမ်းကျင်လိင်ပေါ့သောကြောင့်ငါနှင့်သူဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ပါကသင်ယူရှိရာ, သူဖြစ်ကောင်းအံ့ဘွယ်သောအမှု။ '
သူတို့ရဲ့ 30s အတွက်အထီးလူနာ Viagra မှဖွင့်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုတင်းကျပ်သောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းကလေးငယ်ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့အပေါ်မှာဖိအားဖြစ်ပါတယ်။
'' ကိလေသာနှင့်အလိုဆန္ဒထဲကဘွားထက်, ဤသူတို့သညျမယ့်သတ်မှတ်အချိန်ကဖျော်ဖြေဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရနှင့်လိင် mechanistic ဖြစ်လာသည်။ ထိုလူအပေါ်ဖိအားကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်လာသူသည်သူ၏လက်တဲ့ Viagra ထရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခံစားရ၏။ ''
အဆိုပါ NHS ခွန်အားမရှိခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများထက်ပို£ 58 သန်းထပ်ဆေးညွှန်းန်းကျင်£ 17 သန်းတစ်နှစ်လက်သုံးစွဲသည်။
ယခုအချိန်တွင်သာကနျြးမာရေးအခွအေနနှင့်အတူယောက်ျား - ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, ဆီးချို, မျိုးစုံနဗ်ကြောသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပျက်ကွက် - လူအတော်များများ psychosexual တိုင်ပင်မှူးမတ်ကလူပျိုတို့ကိုအားပေးနေပါသည်ဟုပြောသော်လည်းသူတို့ရဲ့လိင် drive ကိုလျှော့ချဖို့လူသိများကြသည်အခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့ရဖို့ထင်နေကြတယ် ခွန်အားမရှိခြင်းအဘို့အဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ။
အတော်ကြာ NHS ကိုး စား. မှာမန်နေဂျာများကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်ဖို့ထွက်ပေးအပ်ဆေးပြားများ၏အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်မှဆရာဝန်များကအားပေးအားမြှောက်နေကြသည်။
မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ Pfizer ထောက်ပြသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တံဆိပ်အပေါ်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီအသုံးပြုတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကနေဆေးညွှန်းနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ဒါဟာလေ့လာမှုများကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ကြပြီဟုဆိုသည်။ အဆိုပါစွဲအပေါငျးတို့သစိတျထဲမှာပင်လျှင်မူကား, မူးယစ်ဆေးဘဝတွေကိုယိုယွင်းခြင်းမရှိသံသယရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကျော်, Janice Hiller, Essex အတွက် Goodmayes ဆေးရုံမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစိတ်ဓာတ်န်ဆောင်မှုများအဖွဲ့အကြီးအကဲသူတစ်ဦးလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်သူမက Viagra အပေါ်မှီခိုအထီးလူနာအရေအတွက်တိုးလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ သူမ၏အငယ်ဆုံးလူနာ 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမသည် says: '' လူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဖြစ်ကောင်းပထမဒါမှမဟုတ်ဒုတိယရက်စွဲအပေါ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်လိင်ကိုမျှော်လင့်ခံစားရ, သူတို့ကယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမဟုတျပါလျှင်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
'' သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအများကြီးထိတွေ့ခဲ့ကြပြီးနောက်လူတို့သညျအဘို့အဓိကစီးပွားရေးနှိုးဆွသည့်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်ထက်သူတို့နှင့်အတူရှိသောမိန်းကလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤပုံများကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အတွက်လှည့်လည်သွားနှင့်သူတို့ထို့နောက်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိန်းကလေးနှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းမဖွစျနိုငျသညျ။
သူတို့ကယ့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအလုပ်လုပ်ဘို့အပူတပြင်းများမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်လာသောအခါ '' အများအားဖြင့်ယောက်ျားအကူအညီနဲ့ရှာကြာလော့။ သူတို့အားကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးလိင် session ရဲ့အရှည်မိန်းမတို့အဘို့အရေးကြီးဆုံးအရာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်, သူတို့တကယ်ကိုများလွန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်နဲ့အခြားအရာအားလုံးအမြိုးမြိုးချင်သလဲဆိုတာ။ '
အိမ်ထောင်သည်များအတွက်တစ်ဦးခင်ပွန်းလျှို့ဝှက်စွာ Viagra ယူပြီးသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်နိုငျသညျ, Janice ကပြောပါတယ်။
'' မကြာခဏသူတို့မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဖြစ်လာကြပါပြီခံစားရထွက်ရှာသူအမြိုးသမီးမြား '' ဟုသူမကဆိုသည်။
လိုအပ်သူတို့တွင်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲ, စဉ်းစားဟန်လမ်းများတွင်အသုံးပြုလျှင် '' တဲ့ Viagra အလွန်တရာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျား၌ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ ပိုပြီးမကြာခဏမထက်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အဆင့်သစ်ထပ်ပြောသည်။ ''
Viagra အသုံးပြုမှုစက်ဝိုင်းထဲမှာဖမ်းမိလူနာကုသခဲ့သူ Chartered ဘဏ်ဟာလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာ Abigael စန်း, says: '' ဤအလူပျိုတို့ကိုသူတို့ကမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးကြောင့်သူတို့သာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကျေနပ်နေကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ပြဿနာဖြစ်လာသည်။ ''
ငယ်ရွယ်လူတို့တွင် Viagra အသုံးပြုမှုပတ်လည်မညီကြောင်းသူကပြဿနာကိုပိုမိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေးခဲ့အချိန်ရဲ့ခံစားရကြောင့်အရှက်အချက်ရှိနေသော်လည်း, ဒံယေလတက်စကားပြောကြောင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါတယ်။
'' ငါသည်ငါ၏မှီခို၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ - ငါ recreationally အသုံးပြုချွတ်စတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါခက်ခဲရပ်တန့်ဖို့တွေ့ပါသူတူညီတဲ့ကိစ္စများကိုနှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောယောက်ျားတွေငါ၏အအသက်အရွယ်ကိုငါသိ၏။
'ငါကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကခေါ်ဆောင်သွားဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိထင်ပါတယ်။ ငါတစျဦးအဘို့, ကအခမဲ့ဖြစ်ချစ်ကြလိမ့်မည်။ ''
အဆိုပါ Apex အလေ့အကျင့်: 020 7467 8536, theapexpractice.org။ တချို့ကအမည်များကိုပြောင်းထားပါတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန်: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2212529/Addicted-Viagra-They-virile-growing-number-young-men-t-cope-little-blue-pills.html#ixzz28LoPtt32 ကြှနျုပျတို့နောကျလိုကျပါ: Twitter ပေါ်တွင် @MailOnline | Facebook ပေါ်မှာ Dailymail&